रोचक Archives - Page 13 of 16 - Samudrapari.com
बासीभात खानुका फाईदाहरु
काठमाडौं – प्रायजसो हामी बासीभात अरुलाई नखान सुझाव दिन्छौ र फाल्ने पनि गर्दछौं । तर यसले हाम्रो शरीरमा कति धेरै फाईदाहरु पुर्‍याउँछ भन्ने धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । एक अनुसन्धानबाट बासी भातले शरीरमा धेरै फाइदाहरु पुग्ने खुलेको छ जुन यसप्रकार छन् । १. बासीभात खाना चिसो हुने गर्दछ । यसैले बासी खानाले शरीरको तापक्रम कम हुन्छ । यसले शरीरलाई चिसो बनाइ राख्छ। २. बासी भात खानाले पेटसम्बन्धी समस्या पनि कम हुन्छ । ३. यदि तपाईलाई अल्सर भएमा हप्तामा तीन पटक बासी भात खाएमा यसले फइदा गर्छ । ४. बासीभात...
इजिप्टमा सात हजार वर्ष पुरानो शहर भेटियो
काठमाडौं – इजिप्टमा सात हजार वर्ष पुरानो शहर फेला परेको छ । उक्त पुरातत्वविदले फेला पारेका हुन् । नाइल नदीसँगै रहेको लक्सर शहरसँग जोडिएको क्षेत्रमा गरेको उत्खननको क्रममा विरातत्वविदले घर, फलामको हतियार, भाँडासहित १५ वटा ठूला पिरामिड फेला पारेका हुन् । लक्सर शहरको प्रशिद्ध सेती मन्दिरको नजिक यो पुरानो बस्ती भेटिएको बताईएको छ । बस्ती त्यो बेलाका प्रमुख अधिकारी तथा पिरामिड बनाउने व्यक्तिको हुन सक्ने पुरातत्वविदले बताएका छन् । प्राचिन इजिप्टको सुरुवाति चरणमा यो बस्तीमा मानिसको बसोबास रहेको अन...
सर्पहरुको भीडबाट यसरी बच्यो समुन्द्री गोही (भिडियोसहित)
काठमाडौं – सामाजिक सञ्जालमा कुनै न कुनै बेला केहि चीज भाइरल भइरहेकै हुन्छ । परिस्थितिक प्रणाली अन्तर्गत एक जीवले अर्को जीवलाई आफ्नो आहारा बनाउदै आएका छन् । यस्तै एउटा भिडियो हाल सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । जुन भिडियोमा सर्पको आहाराबाट एउटा सामुन्द्रिक गोहीले आफ्नो ज्यान जोगाउन सफल भएको छ । समुन्द्रको मरुभुमीमा बसरहेको बेला आहार खोज्दै हिडेको गोहीलाई सर्पले आफ्नो आहारा बनाउन खोज्यो तर उसले निक्कै चलाखी पूर्वक आफनो ज्यान जोगाउन सफल भएका छन् । उसले धेरै सर्पहरुको भीडबाट बसेर भाग्न सफल भ...
खेल मैदानमै कट्टु तानिदिएपछि … (भिडियोसहित)
काठमाडौं – सन् २०१८ मा रसियामा हुन लागेको विश्वकप छनोटका लागि अहिले छनौट खेल भईरहेका छन् । यसैबीच आइतवार राति भएको बोस्निया हर्ज गोभिना र ग्रिसबीचको खेल तनावपूर्ण रह्यो । समूह एच अन्तर्गतको ग्रिसको घरेलु मैदान काराइसकाकिस स्टेडियममा भएको खेलमा शुरुबाटै तनाव भएको थियो । पहिलो हाफको १० औं र १२ औं मिनेटमा बोस्नियाका एमिर स्पाहिक र कप्तान एडिन जेकोले एलो कार्ड पाएका थिए । त्यसपछि खेलको ३२ औं मिनेटमा ओरेस्टिस कामेइजिसको आत्मघाती गोलमा अग्रता लिएको बोस्नियाले खेलको इन्जुरी समयमो अन्तिम मिनेटमा गोल...
यी हुन, विश्वकै सबैभन्दा सेक्सी गणित शिक्षिका (फोटो र भिडियोसहित)
काठमाडौँ – धेरैजसो विद्यार्थीलाई स्कुलमा सबैभन्दा धेरै लाग्ने विषय गणित पनि हो । बिद्यार्थीहरुले उनीहरुले गणित विषयमा आफूलाई निक्कै कमजोरी ठान्ने र फेल हुने गर्दछन् । सायद यही कारण हुन सक्छ बिद्यार्थीहरुले गणित विषयको शिक्षकलाई मन पराउँदैनन् । तर मिन्स्क, बेला रुसका विद्यार्थीहरुले भने गणित शिक्षिकालाई असाध्यै मन पराउँछन् । बिद्यार्थीहरुले यसरी मन पराउने शिक्षिका ओकान्सा नेभेसेलाया हुन् । उनी गणित पढाउन जाँदा निक्कै सेक्सी भएर जाने गर्दछिन्, जसका कारण विद्यार्थीहरुको आकर्षणको केन्द्र बन्...
‘नो डिजायर, नो सेक्स, नो स्पाइसी फुड
बनारस - भारतको बनारसमा एक सय २० वर्षका एक बाबा छन्, जो अहिले पनि तन्दुरुस्त छन् । ‘नो डिजायर, नो सेक्स, नो स्पाइसी फुड’ सिद्धान्तमा जीवन चलाउँदै आएका बाबा शिवानन्द अहिले पनि युवा जस्तै ‘फिट’ छन् । बाबा शिवानन्द हरेक दिन बिहान तीन बजे उठ्छन् । नुहाएपछि ध्यान र एक घण्टा योग गर्छन् । उनको खाना पनि सादा हुन्छ । उनले उसिनेको आलु, दालभात, करेलाको तरकारी वा नीमको सुकेको पात खान्छन् । उनले पिरो तथा तेल हालिएको खाना खाँदैनन् । शिवानन्दले दूध तथा फलफूल पनि खाँदैनन् । देशमा अहिले पनि यस्ता धेरै नागरिक...
विहेपछि महिला मोटाउँछन, डिभोर्सपछि पुरुष किन ? यस्तो रहेछ वैज्ञानिक कारण !
पुरुष मित्रहरु कुनै स्लिम स्त्रीलाई मन पारेर विहे गर्ने फैसला गर्दै हुनुहुन्छ भने एउटा कुरामा सम्झौता गर्नैपर्छ । त्यो के हो भने तपाइँले मन पारेकी स्लिम केटीको सरिर विहेपछि पनि उस्तै स्लिम रहन्छ भन्ने पक्का हुँदैन । अर्थात् विहेपछि कुनैपनि महिलाको सरिर भद्धा हुँदैजान्छ । त्यसैले अहिले भोलि भद्धा बनेको खण्डमा पनि उस्तै माया गर्ने बाचा गरेर लगनगाँठो कस्ने सुर कस्दा राम्रो होला । अमेरिकामा गरिएको पछिल्लो अनुसन्धानले विहेपछि महिलाहरु मोटाउने र सम्बन्ध विच्छेदप्रति पुरुषहरु मोटाउने तथ्य पत्ता लगाए...
यी हुन् १५ करोडको जिब्रो भएकी महिला ?
एजेन्सी – यदि कसैको जिब्रोको मूल्य १५ करोड छ भन्यो भने पक्कै पनि तपाइलाई विश्वास नलाग्न सक्छ । तर तपाईलाई विश्वास नलागेपनि यो सत्य हो । थाहा भएकै कुरा हो, पुरुषको तुलनामा महिलाको जिब्रो शक्तिशाली हुन्छ र खानेकुराको स्वाद लिने मामिलामा उनीहरू अगाडि हुन्छन् भनेर पनि भनिन्छ । यही कारण यो दुनियामा महिलाहरूको जिब्रो यति महँगोसम्म हुँदो रहेछ । क्याबडरी कम्पनीमा काम गर्ने एक महिलाको जिब्रोको भाउ झन्डै १५ करोड रुपैयाँ छ । हाईले कर्टिस नामकी ती महिलाको काम भनेको नै मात्र चकलेटको स्वाद चाख्नु र चकल...
अमेरिकामा सुनको शौचालय !
अमेरिका – अमेरिकामा सुनको शौचालय बनाइएको छ । अमेरिकाकाको न्युयोर्क सिटीको एउटा संग्रहालयले सर्वसाधारणका लागि सुनको शौचालय प्रयोग गर्न अनुमति दिएको हो । १८ क्यारेट सुनबाट बनाइएको शौचालय पहिलो पटक सर्वसाधारणका लागि खुलाइएको हो । गगेनहेम म्युजियमका इटालियन कलाकार माउरिजियो क्याटलेनले म्युजियमको चौथो तलाको शौचालयलाई १८ क्यारेटको सुनको शौचालयमा परिणत गरेका हुन् । त्यहाँ पुगेका दर्शकले अन्य सुविधा सरह त्यो शौचालय पनि प्रयोग गर्न सक्छन् । यो सुनको ट्वाइलेट १६ सेप्टेम्वर देखि प्रयोगमा ल्याइएको...
आफ्नै पत्नी बिक्रीको विज्ञापन अनलाइनमा !
एजेन्सी – आफ्नै पत्नी बिक्रीको विज्ञापन प्रकाशित भयो भन्दा तपाईँलाई विश्वास नलाग्न सक्छ । तर बेलायतमा एक पुरुषले आफ्नी पत्नी लिलामीमा बिक्री गर्नका लागि विज्ञापन प्रकाशित गरेका छन् । अनलाइन लिलामी साइट इबे मा ३३ वर्षीय साइमन ओकेनले पत्नीको लिलाम बिक्रीका लागि विज्ञापन गरेका हुन् । वेकफिल्ड, योर्कशायर बस्ने ओकेनले आफ्नी २७ वर्षीया पत्नी लिएन्ड्राको तस्बिर राखेर विज्ञापन दिएका हुन् । उनले पत्नी बिक्री गर्नु पर्नाका कारण समेत उल्लेख गर्दै खरिदकर्तालाई लिएन्ड्रा खरिद गर्दा हुने नाफा–नोक्सानको ले...